नेपाल देश र मान्छे- विविधा - कान्तिपुर समाचार
नेपाल देश र मान्छे
यो देशमा कस्ता मान्छे चिनिन्छन्, कस्ता मान्छे चिनिँदैनन् भन्नुको खास अर्थ हुन्छ । यो देशका केही चिनिएका र केही नचिनिएका मानिसहरुबारे लेखिनु एक उत्तेजक विषय हुनसक्छ ।
चैत्र ८, २०७६ अभि सुवेदी
देश र मान्छेको सम्बन्ध संकट परेको बेला तीव्र हुन्छ । देश चलाउने सरकार र जनताको सम्बन्ध यस्तै बेला कहिल्यै नभएको पाराले परिभाषित हुन्छ । त्यस्तो बेला एउटा साझा समस्याको परिभाषा गरिन्छ । अनि त्यसको निदानका उपायहरू खोजिन्छ । सरकार, राजनीति गर्ने र शक्ति हत्याएर बस्नेहरूका त्यस्तै बेला परीक्षा हुन्छ ।
अहिले कोरोना भाइरसको प्रकोप परेका बेला नेपालमा सरकारको के पाठ हुन्छ भन्ने विषयमा चिन्तन हुन थालेका छन् । यो प्रकोपले विश्व आक्रान्त भएको बेला नेपाल योसँग जुध्ने कार्यक्रमहरू घोषणा गरिरहेको छ । तर पनि यो अति भयानक र चुनौतीपूर्ण हो भन्ने कुराको बोध अहिले त्यति व्याप्त हुन सकेको अवस्था हो कि होइन भन्ने कुरा अब हाम्रै व्यवहारले देखाउनेछ । यस्तो बेला सफा आचरण, पारदर्शी नीति भएका क्रियाशील सरकार र दलहरूको अपेक्षा गरिन्छ । यस्तो बेला सर्वसाधारण जनता र सरकार चलाउने र शक्ति खेलाई बस्नेहरूको बीचमा कत्तिको समझदारी बन्छ, त्यसैबाट सबै कुरा बनिने र बिग्रिने हुन् । नेपालका मेडिकल डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू धेरै कुशल छन् भन्ने कुरामा शंका छैन । तर पनि अस्पताल कहाँ र कसले खोल्ने, दूरदराजमा खोल्ने कि नखोल्ने जस्ता कुरादेखि लिएर यसमा लगानी गरिने धन र खेलमा राजनीति कसरी जोडिँदै आएको छ भन्ने कुराले यो क्षेत्र आक्रान्त हुँदै आएको हो ।
बीसौं र यो एक्काइसौं शताब्दीमा निस्केका रेकर्डहरूले देखाएका छन्, मानिसले हताहत गरेका एक चौथाइ जतिमात्र नरनारी प्राकृतिक प्रकोपमा मरेका छन् । अंग्रेजी उपनिवेश उत्तरको छोटो समयमा बीसौं शताब्दीका चालीस र साठीका दशकहरूमा भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशहरू बनिए । यी राज्य बनिने क्रममा मानिसबाट नै हताहत भएका लाखौंलाखको अनुपातमा प्रकृतिबाट मारिएका मानिसको संख्या अत्यन्त थोरै छ । बरु प्रकृतिको प्रकोप बढेको बेला मानिसले सर्वसाधारण जीवन भोग्नेहरूलाई झन् कठिन परिस्थिति बनाइदिएका उदाहरण छन् । नेपालकै उदाहरण लिएर हेरे हुन्छ । गएका बीस–पच्चीस वर्षमा नेपालले गृहयुद्ध झेल्यो । महाभूकम्पको विनाश भोग्यो । तर पनि मानिसबाट मानिसको हताहत भएको संख्या नै बढी छ । अनि इतिहासको पद्धति हो, मानिसले मानिसको हताहत गरेको विषय पछिबाट छलफल हुन्छ । त्यसको निदान गर्ने अनि त्यसबाट पीडितले न्याय पाउने साथै विस्थापितहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा चक्रवातजस्तो गरेर अगाडि आउँछन् । दक्षिण अफ्रिकाको सत्यनिरुपण र मेलमिलाप कार्यक्रमको अनुकरण गर्ने नेपाल ठूलै अलमलमा परेको छ । भूकम्पले ढालेका थलोहरू र क्षति लगभग निश्चित हुन्छन् । त्यसबाट हताहत भएकाहरू सम्झना, वर्णन अनि चित्रमा भेटिन्छन् । तिनले भोगेका विपद् कसैले लुकाउन सक्दैनन् । अर्कोतिर युद्धमा हताहत हुनेहरू सम्झनामा हुन्छन्, तर ती विलयन भएकाहरूका थातथलो भेटिँदैनन् । अझ सरकारमा को छन् भन्ने कुरा मुख्य कारक हुन्छ । खोज गर्ने र समाधान खोज्ने विषयमा सरकार असहयोगी भयो भने त त्यो विषय झन् जटिल हुन्छ ।
यो नेपाल देशका मान्छेले कस्ता जितहरू जिते अनि कस्ता हारहरू भोगे, कस्ता विपद्का सामना गरे अनि कस्ता आशाहरू साकार गरे जस्ता कुराको लेखाजोखा गर्ने खासै केही आधार छैनन् । त्यसो त यो अरु देश र समाजको पनि अनुभव हो । तर हामीले नेपाल देशकै अनुभवबारे सोच्नु र कर्मशील हुनुछ । एउटा कुरा भनिहाल्नुपर्छ । देशले भोगेका अनुभव भन्नाले व्यक्तिहरूका अनुभवलाई बुझ्नुपर्छ । यो देशमा कस्ता मान्छे चिनिन्छन्, कस्ता मान्छे चिनिँदैनन् भन्नुको खास अर्थ हुन्छ । यो देशका केही चिनिएका र केही नचिनिएका मानिसहरूबारे लेखिनु एक उत्तेजक विषय हुनसक्छ । म जस्तो एक साहित्यिक मानिसलाई अमूक व्यक्ति अनेकौं किसिमले चाखलाग्दो हुनसक्छ । उसमाथि टाँगिएको आकाश कस्तो छ, ऊ धरतीको कस्तो कुनामा बस्छ, ऊ आफ्नो र अरुको जिजीविषा कसरी जुटाउँछ, ऊ कसरी बनिएका घरमा बस्छ, अनि उसले साना हुरीले जस्तो गरेर आफ्ना सपना खेद्दै कसरी समय गुजारिरहेछ, ऊ कस्ता विचार गर्छ, पृथ्वीलाई कसरी वरण गर्छ, अनि घाम, जून र ताराहरूले उसको जीवनमा कसरी खेल खल्छन् र ऊ आफ्ना कुरा अरुमाथि कसरी लागू गर्न चाहन्छ, ती एक साहित्यकारका निम्ति चाखका विषय हुन् ।
तर जब यो देशका ती मान्छेहरूमाथि अहिलेका युवाहरूले चाख राख्छन्, तिनले तिनै मानिसहरूका अरु पक्षहरूलाई वर्तमानको सन्दर्भमा बुझ्न र प्रयोग गर्न खोजेको बुझिन्छ । ती इतिहासका पाइतालाका डोबहरू यहाँसम्म कसरी आइपुगेका छन्, हेर्न चाहन्छन् । जस्तो कि ती उन्नाइसौं शताब्दीमा जर्मनमा जन्म लिएर विचार फैलाएका कार्ल मार्क्सले एक्काइसौं शताव्दीका यी दुर्दान्त वर्षहरूसम्म आफ्ना चेलाचपेटाहरूका शिरमाथि कसरी आशिर्वादका औंलाहरू चलाइरहेका छन्, हेर्न चाहन्छन् । सादा जिन्दगी बाँचेका, अंग्रेजी परिधान बहिष्कार गर्दै आफैंले बुनेको खादीको कपडाले बेरिएर अरबी समुद्रको दान्डीसम्म लाखौं सहयात्रीसहित २३९ माइलको पैदल यात्रा गरेर ब्रिटिसराज थर्काउने महात्मा गान्धीका चेलाहरूले अहिले कस्ता अवतार फेरेका छन्, हेर्न चाहन्छन् । नेपाली समाजमा अनेकौं व्यक्तित्व र तिनका कर्मबारे लेख्न सहज देखिए पनि यो विषय जटिल छ । तिनका विचारले कस्ता परिवर्तन ल्याएका छन् वा त्यसलाई बाधा गरेका छन्, तिनबारे जान्ने चाहनाले म जिन्दगीमा अभिप्रेरित भइआएको छु ।
नेपालको समाज परिवर्तन गर्ने कर्म गर्नेमा लेखक, राजनीतिकर्मी, कलाकार, संगीतकार, राजनीतिज्ञ, वास्तुविद र ‘एलिट’ भन्ने शब्दले चिनिने वर्ग र मानिसहरूको एउटा कलेवर छ । एउटा मौन, कहिलेकाहीं उत्ताल, सहनशील र दृष्टि बनाउँदै–भत्काउँदै बसेको वर्ग छ, जो हिजो पनि थियो र आज पनि छ । मैले यस्ता व्यक्तिहरूलाई कसरी भेटेँ, कहिले भेटेँ, अनि ती कस्ता थिए भन्ने कुरा लेख्ने मेरो सधैं चाहना रहिआएको छ । मैले आफू विद्यार्थी अवस्थादेखि यस्ता मानिसहरूले समाजमा खेलेको भूमिकाबारे चाख र जानकारी राखिआएका निकै दशक भइसकेछन् । पञ्चायतकालमा नै नेपालका एलिट को हुन् भन्ने विषयमा बहस भएका थिए । मेरा गुरु स्व. कमलप्रकाश मल्लले यो विषयमा बहस चलाएका थिए । ‘बसुधा’ भन्ने अंग्रेजी पत्रिकामा उनले यस विषयका बहस उठाएपछि केही चर्चा भएका थिए । त्यसमा उनका समकालीन स्व. हर्क गुरुङले अनि केही समयपछि स्व. डी.पी. भण्डारीले भाग लिएका थिए । पञ्चायतकालको एकतन्त्री शासन पद्धतिभित्र स्वतन्त्र रूपले नेपाली मानिसका चरित्रबारे थोरै भए पनि बहस भएको कुरा चाखलाग्दो थियो । त्यही बेला नेपाली पात्रहरूभन्दा भिन्न बाहिरी पात्रहरू नेपालमा नै भेटेका मेरा अनुभवहरू छन् । खासगरी नेपालमा सन् साठी र सत्तरीका सुरुका वर्षहरूमा नेपालमा घुम्न आएका हिप्पीहरूले गर्दा पात्रहरू फरक–फरक हुनेरहेछन्, अनि तिनका वैश्विक सपना र भ्रमहरूको पनि महत्त्व हुनेरहेछ भन्ने मलाई बोध भएको हो ।
नेपालमा अर्कोथरी मानिसहरू भनेका सिर्जनशील व्यक्ति हुन् । म एक साहित्यकार र नाट्यकर्मी भएको हुनाले यी मानिसहरूको समाजमा प्रभाव बलियो भइआएको छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ । लेखक, संगीतकार र कलाकार मानिसहरूले नेपालमा एकतन्त्रीय र सामन्ती शासन पद्धतिभित्र पनि स्वतन्त्र चिन्तनको निम्ति काम गरेको लामो परम्परा छ भन्ने मेरो धारणा छ । अक्टोबर २०१९ मा टोरन्टो विश्वविद्यालयको निमन्त्रणामा मैले यही विषयमाथि लामो पत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ । यताको भेगका विज्ञ प्राध्यापकहरूले मसँग जमेर छलफल गरेका थिए । उनीहरूले सोधेका थिए, मेरो विचारमा नेपाली समाजका महत्त्वपूर्ण मानिसमा राजनीति गर्ने मानिसहरू किन धेरै पर्छन् ? के नेपाली समाज धेरै परम्परागत संस्कृतिमुखी हो ? मैले यसमा सिर्जना गर्नेहरूका ऐतिहासिक स्वतन्त्रतामुखी पाठको चर्चा गरेँ  । मैले भनेँ, नेपाली समाज एउटा सामन्ती युगबाट राम्ररी निस्किन नसकेको अवस्थामा छ । नेपाल देश बुझ्न यहाँका जातजाति, हैकम चलाउने वर्ग, वर्गीय र लैङ्गिक विभेद गर्नेहरू, अनि सीमान्त मानिसहरू, राजनीति गर्ने, सिर्जना गर्ने सबैको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नुपर्छ । यो विषयमा धेरै अध्ययन भएका छन्, जुन कुरामा उनीहरूमध्ये कति जनालाई राम्ररी जानकारी भएको कुरा उनका किताब र लेखहरूले देखाउँछन् ।
मैले आफ्नो अध्ययनका विषय, स्मृति र कामलाई आधार राखेर भन्ने केही कुराहरू छन् । तर ती कुरा म आफूले युगको संघार र बलेंसीमा भेटेका मानिसहरूका कथासँग जोडेर राख्नु उपयुक्त ठान्छु । म आगामी लेखहरूमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई लिन लागेको छु । तिनका वरिपरि घुम्ने समय र तिनका साना–ठूला कर्महरूबारे लेख्नेछु । एउटा मान्छेदेखि अर्को मान्छेसम्म बनिएको इन्द्रेनी हो, समय । नेपाली समय मानिसहरूका जीवनको कथा हो । अमूक मानिसका कति सन्तान र नातागोता थिए भन्ने विषय नभई तिनको वरिपरि कस्तो राजनीति, कस्तो संगीत, कस्ता कविता र उपन्यास, कस्ता चित्रका रङहरू थिए र तिनका यात्रा कस्ता थिए भन्ने विषयमा लेख्ने विचार छ । यस्तै कथालाई महाकवि देवकोटाले इतिहासमा टाँगिएका इन्द्रेणी भनेका थिए । प्रकाशित : चैत्र ८, २०७६ ०९:४६
कोरोनाको मानव यात्रा
जीवजन्तुमा हुने आनुवंशिक परिवर्तन, चाहे सूक्ष्म जीव होस् या विशाल, नितान्त प्राकृतिक नियममै पर्छन् । विषाणुमा आएको यो परिवर्तन घातक र चुनौतीपूर्ण बन्नुको कारण हो, मानवबाट मानवमा सर्नु ।
चैत्र ८, २०७६ डी.बी. कट्‌टेल
विषाणु आतंकका कारण २१ औं शताब्दीको सुरुवाती दशकहरू मानव स्वास्थ्यका लागि निकै चुनौतीपूर्ण बने । सन् २००२ को ‘सार्स’, २००९–२०१० मा फैलिएको ‘स्वाइन फ्लु’, २०१२ को ‘मर्स’, २०१३ मा ‘इबोला’, र अहिले विश्व समुदायलाई चपेटिरहेको कोरोना विषाणु (कोभिड–१९) २० वर्ष यताका भयानक महामारी हुन् ।
अप्रत्यासित निस्किएका यी रोगहरूले मानव स्वास्थ्यलाई असर त पुर्‍याएको छ नै, सँगसँगै आधुनिक विज्ञानलाई समेत चुनौती दिएका छन् । उपयुक्त उपचार पद्धतिको विकास नहुनु थप चुनौती हो । यद्यपि मानवमै कतिपय विषाणुसँग लड्न सक्ने क्षमताको पनि विकास हुँदै आएको तथ्य अनुसन्धानले देखाउँदै आएका छन् । तर जीवाणु र विषाणुहरूले अप्रत्यासित रूपमा आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरिदिन्छन् । अनि यस विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता नहुनाले बेला–बेलामा यी रोगले महामारीकै रूप लिन्छन् ।
अहिले कोरोना भाइसरको मूल स्रोतका विषयमा धेरै भ्रम देखिएको छ । त्यसैले कोरोना विषाणु कहाँबाट आयो भन्ने प्रसंग यो लेखमा उठाउन खोजिएको छ । मानिस, जनावर र पन्छी बीचको अन्तरक्रिया अनादिकालदेखि नै चल्दै आएको हो । जीव विकासक्रमको इतिहासलाई हेर्दा अहिलेका धेरै घरपालुवा पशुपन्छी कुनै समयमा जङ्गली थिए । मानवको जङ्गली जीवजन्तुसँग नजिक हुने सिलसिला अझै टुटेको छैन । मानिसले आफ्नो विकासक्रममा धेरै ठूला आरोह र अवरोह पार गरेको छ । ६ हजार वर्ष पहिलेको तुलनामा मानिसले आफ्नो आकार–प्रकार, बुद्धि–विवेक र क्षमतामा धेरै परिवर्तन गरेको छ । र यो सिलसिला अनन्त कालसम्म चलिनै रहनेछ । चार्ल्स डार्बिनको सिद्धान्तबाट हामीले जीवजन्तुको विकास क्रमबारे सजिलै बुझ्न सक्छौं । दर–पिढीमा पैत्रिक गुण वितरण र नश्लमा हुने आनुवंशिक उत्परिवर्तनलाई ग्रेगर मेण्डलले पनि राम्रैसँग व्याख्या गरेका छन् । मानव हुन् या पशुपन्छी वा सूक्ष्म जीव नै किन नहुन्, यी सबैमा विषाणु–गुणसूत्र वितरण र आनुवंशिक उत्परिवर्तनको नियम लागू हुन्छ । सबैको एउटै उद्देश्य धर्तीमा आफ्नो उपस्थिति कायम गराइराख्नु हो । आनुवंशिक उत्परिवर्तनबाट अस्तित्व बनाएको नयाँ विषाणु कोरोना हो । यो विषाणु प्राकृतिक स्रोत, माध्यम अनि मानव बीचको अन्तरक्रियाबाट जन्मिएको हो । विषाणुहरू कुनै निश्चित प्राकृतिक स्रोतमा अनादिकालदेखि नै यो धरतीमा छन् । तर प्राकृतिक उद्गमबाट जनावरमा सर्नु वा हामी मानवसम्म आइपुग्नुमा हाम्रै क्रियाकलाप जिम्मेवार छ ।
झन्डै १०२ वर्षअघि अर्थात् सन् १९१८ मा महामारीको रूपमा देखापरेको ‘स्पेनिस फ्लु’का कारण दसौं लाख मानिसको मृत्यु भयो । मर्नेहरूमा २०–४० उमेर समूहका युवा धेरै थिए । अमेरिका लगायत धेरै युरोपेली राष्ट्र यसबाट प्रभावित बने । स्वाइन फ्लुको प्रकारमध्येकै मानिएको यो रोगको विषाणुले आफ्नो आनुवंशिक संरचनामा कहाँ परिवर्तन गर्‍यो र कसरी महामारीको रूपमा लियो अझै पनि अज्ञात छ । स्वाइन फ्लुको अर्को महामारी २००९ मा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र मेक्सिकोबाट सुरु भएको थियो । यो विषाणु, सुँगुर, चरा र मानव बीचको अन्तरक्रियाबाट पुनर्संयोजन भई नयाँ आनुवंशिक स्वरुपमा मानवमाझ फैलिएको थियो । यसपछिको अर्को महामारी इबोला विषाणुका रूपमा २०१३ डिसेम्बरबाट अफ्रिकी राष्ट्र गुइनियाबाट फैलिएको थियो । यसलाई पनि पशुजन्य रोगकै रूपमा मानियो । यद्यपि यसको प्राकृतिक मूलस्रोत के हो भन्ने तथ्य अझै पनि स्पष्ट छैन । इबोला एक अफ्रिकी बच्चाबाट फैलिएको विश्वास गरिन्छ । केही वैज्ञानिकहरूले यस्तो मानव प्रकोपलाई जङ्गली जनावर गोरिल्ला र चिम्पाञ्जीमा भएको प्रकोपसँग गाँसेर हेरे । केही वैज्ञानिक चमेरोलाई यसको कारण मान्छन्, किनकि यो चमेरोमा इबोला विषाणुसँग मिल्ने केही आनुवंशिक सङ्केतहरू छन् । पुच्छर नभएको एक प्रकारको चमेरो पनि यो विषाणुको प्राकृतिक स्रोत हुनसक्छ भन्ने केही वैज्ञानिकको मान्यता छ ।
२००२ मा दक्षिण चीनमा देखापरेको ‘सार्स’, २०१२ मा मध्यपूर्वमा देखापरेको ‘मर्स’ र गत वर्षको डिसेम्बरको अन्तिम हप्ताबाट चीनको वुहानमा देखापरेको कोभिड– १९ विषाणुको प्राकृतिक स्रोत चमेरो नै हो भन्ने आम वैज्ञानिकहरूको एकमत छ । जुन विषाणु प्राकृतिक स्रोत ‘चमेरो’, माध्यम र मानव बीचको अन्तरक्रियाबाट आनुवंशिक संरचना परिवर्तन गर्दै नयाँ स्वरुपमा जन्मिएको हो । अस्ट्रेलिया र पूर्वी एसियामा देखापरेको विषाणुहरू जस्तै– ‘हेन्ड्रा’ र ‘निपा’को प्राकृतिक स्रोत पनि चमेरो नै हो भन्नेमा धेरै वैज्ञानिक सहमत छन् । चिनियाँ वैज्ञानिक वेन्दोङ लीको २००५ मा ‘साइन्स’ जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धानले भन्छ, चमेरोमा यस्ता अन्य विषाणुहरू पनि हुन सक्छन्, जुन अझैसम्म देखापरेको छैन । उनले कोरोना सँगसँगै अन्य विषाणु (हेनिपा), जसले आफ्नो आनुवंशिक संरचना परिवर्तन गर्दैछ र यसले प्रकोपको सम्भावना निम्त्याउँछ भनेर त्यो बेला औंल्याएका थिए । धेरै वैज्ञानिक चमेरामा रहेको ‘सार्स’ सम्बन्धित कोरोना विषाणुले मानवलाई संक्रमण गर्नसक्ने क्षमता राख्छ भन्नेमा सहमत छन् । चीनको ग्वाङतोङ प्रान्तमा २००२ मा ‘सार्स’ देखा नपरुन्जेल कोरोना विषाणुलाई रोगजन्य मानिएको थिएन । २०१८ मा ‘नेचर’ जर्नलमा प्रकाशित अर्का चिनियाँ वैज्ञानिक चिए छुईको अनुसन्धानमा, यसअघि कोरोना विषाणुले हल्का संक्रमण गर्थ्यो वा मानव प्रतिरक्षा प्रणाली त्योसँग लड्न सफल थियो भन्ने कुरा उल्लेख छ ।
जङ्गली विषाणु कसरी मानव समुदायसम्म आइपुग्छ त ? यसलाई बुझ्न विगतका केही तथ्य र घटनाक्रम हेरौं । ‘सार्स’को प्रकोपको बेला चीनको युनान प्रान्तमा संक्रमणका कुनै बिरामी भेटिएका थिएनन् । प्रकोप सुरु हुनुअघि कोरोना विषाणु पहिले जनावरको संसर्गमा रहेको थियो भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्ने विभिन्न आधार छन् । विषाणुलाई जनावरको कारोबार गर्ने व्यापारीसम्म पुर्‍याउने काम बिरालोले गर्‍यो । त्यो संक्रमित बिरालो चीनको ग्वाङतोङ बजारमा पुग्यो । मानवमा फैलनु अघि विषाणुमा थप उत्परिवर्तन भयो र घातक बन्यो । वैज्ञानिक छुई र उनको समूहले गरेको अनुसन्धानले भन्छ, मानवसँग सरोकार रहेको त्यो कोरोना विषाणुको प्राकृतिक स्रोत चमेरो नै हो । र मानवमा आइपुग्न बिरालो माध्यम बन्यो । बिरालोमा पाइएको ‘सार्स’ कोरोना विषाणु चमेरोबाट सरेको थियो । यस्ता धेरै प्रमाण चीनका विभिन्न प्रान्त लगायत, युरोप, अफ्रिका र दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा पनि पाइएका छन् । ‘सार्स’ सम्बन्धित कोरोना विषाणु ठूलो भौगोलिक क्षेत्रमा छरिएको छ र चमेरोमा यो निकै पहिलेदेखि थियो भन्ने प्रस्ट छ ।
२०१२ मा देखापरेको ‘मर्स’ कोरोना विषाणुलाई चमेरोबाट मानवसम्म आइपुग्नुमा वैज्ञानिकहरूले संक्रमित ऊँटलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् । मध्यपूर्वी राष्ट्र, अफ्रिका र दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा पाइने ऊँट धेरै अघिदेखि ‘मर्स’ कोरोना विषाणुका लागि चाहिने पर्याप्त रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ भन्ने मान्यता वैज्ञानिकमा छ । यसको अर्थ ऊँटमा धेरै समय अघिदेखि यो विषाणु विद्यमान थियो भन्ने नै हो । ३० वर्षअघि, अर्थात् सन् १९८३ मा एम.ए. मुल्लर र उनको समूहले गरेको अध्ययनले पनि यो तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । चिए छुईले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययनले भन्छ, त्यो बेला महामारीको रूपमा रहेको ‘मर्स’ कोरोना विषाणुको प्रभाव पनि आक्रामक र कम आक्रामक गरी २ तरिकाले देखिएको थियो । मध्यपूर्वी राष्ट्र जस्तै– संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, ओमान, जोर्डन अनि एसियाली मुलुक दक्षिण कोरिया र थाइल्यान्डका मानव समुदायमा यो महामारीको रूपमा देखापर्‍यो । तर अफ्रिकी राष्ट्र, नाइजेरिया, बुर्किना फासो, इथियोपिया लगायत राष्ट्रमा विषाणुले मानवमा संक्रमण गरेन । यद्यपि यी दुवै विषाणुको पूर्वज एकै भए पनि भौगोलिक रूपमा मानव संक्रमणमा भने विविधता देखियो ।
अहिले फैलिएको कोभिड–१९ का सन्दर्भमा, चिनियाँ वैज्ञानिक स्याओलु थाङ र उनको समूहको नयाँ कोरोना विषाणु सम्बन्धी अनुसन्धान पत्र भर्खरै (२०२०) मा ‘माइक्रोबायोलोजी’ जर्नलमा प्रकाशित छ । उनीहरूको अनुसन्धान विवरणले भन्छ— ‘कोभिड–१९ विषाणु खतरनाक बन्नुको कारण आनुवंशिक संरचनामा यसका विभिन्न जात र उपभेदको पुनर्संयोजनका अतिरिक्त, उत्परिवर्तन र प्राकृतिक छनोट नै हो ।’ अहिले यो विषाणुको प्रभाव पनि ‘मार्स’ कोरोना विषाणुको जसरी नै आक्रामक र कम आक्रामक गरी २ रूपमै पर्‍यो । सुरुवाती चरणमा आक्रामक प्रकारको विषाणु वुहानमा देखापर्‍यो र क्रमशः फैलिँदै गयो । तर दोस्रो प्रकारको विषाणु जसलाई विकासक्रमको आधारमा पुरानै मानिएको छ, उसको आवृत्ति क्रमशः जनवरीको सुरुआतबाटै घट्न थाल्यो । र यसको असर थोरै देखियो । यद्यपि यी दुवै प्रकारका (आक्रामक र कम आक्रामक) विषाणुको पूर्वज भने एकै हो, जुन चमेरोमा संग्रहित छ । यसलाई वैज्ञानिकहरूले आनुवंशिक अनुक्रमहरूको तुलनाबाट पनि पुष्टि गरिसकेका छन् । कोभिड–१९ विषाणु वुहानको स्थानीय समुद्री खाद्यपदार्थ, जङ्गली जनावर र जीवित कुखुराको बिक्री–वितरण गर्ने बजारबाट फैलिएको विश्वास गरिन्छ । तर मानवमा कसरी सर्‍यो अर्थात् यसका लागि बीचको मध्यम के हो भन्ने अझै प्रस्ट भइसकेको छैन ।
गएको २ दशक यताबाट ‘सार्स’ सम्बन्धित कोरोना विषाणुले विश्वमा ठूलो आर्थिक क्षतिमात्र पुर्‍याएको छैन, मानव बुद्धि र विवेकलाई समेत ठूलो चुनौती दिएको छ । जीवजन्तुमा हुने आनुवंशिक परिवर्तन, चाहे सूक्ष्म जीव होस् या विशाल, नितान्त प्राकृतिक नियममै पर्छन् । विषाणुमा आएको यो परिवर्तन घातक र चुनौतीपूर्ण बन्नुको कारण हो, मानवबाट मानवमा सर्नु । र विषाणुलाई प्राकृतिक स्रोतबाट मानवमा सार्ने माध्यम हामी नजिकैका जीवजन्तु हुन् । र सधैं हाम्रै वारिपरि रहने तिनै जीवजन्तुहरू आफै पनि यस्ता विषाणुबाट संक्रमित हुने गरेका छन् ।
-कट्टेल बेइजिङस्थित चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेसका सहप्राध्यापक हुन् ।
प्रकाशित : चैत्र ८, २०७६ ०९:३८